Archive de l'auteur | NewsMada | Page 948
Rano sy fidiovana ary fahadiovana : nofantarina ireo laharam-pahamehana
Par Taratra sur 14/07/2016 Divers, NS Malagasy
Notanterahina, tetsy amin’ny DLC Anosy omaly ny atrikasam-pirenena ho fampandrosoana ny paikady ho fanatsarana ny tontolon’ny rano sy fidiovana ary fahadiovana izay niarahana tamin’ny Diorano Wash sy ny Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) sy ireo mpiantsehatra rehetra eo amin’ny rano sy fahadiovana ary fidiovana. Fantatra tamin’izany araka ny fanazavana nentin’ny mpandrindra nasionalin’ny Diorano […]
Amerikanina : nahazo mari-boninahitra ny mpanolotsaina ara-kolontsaina
Par Taratra sur 14/07/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Notoloran’ny fanjakana malagasy mari-boninahitra, “Officier de l’Ordre National Malagasy”, ny mpanolotsaina momba ny serasera sy ny kolontsaina, eo anivon’ny masoivoho amerikanina, Luke Zahner. Mendrika izany ny asa nataony, hanamafisana ny fifandraisan’ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka amerikanina. Naharitra roa taona mahery ny niasany teto Madagasikara ary anisan’ny nivaingana sy nisongadina tamin’izany ny fananganana ny American […]
Mila arindra ny asa : ampahombiazana ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo
Notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny Androm-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo izay nokarakarain’ny ofisim-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo (ONN). Tarigetra manomboka izao ary anisan’ny novoizina tamin’ny alalan’ny lohahevitra manokana ny fandrindrana ny asan’ireo mpiantsehatra rehetra amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara mba hisian’ny fahombiazana. Marolafy ireo mpiantsehatra ireo ka anisan’izany ireo miandraikatra ranofotsiny […]
Fanabeazana fototra : haparitaka ny malety matematika
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena Anosy ny fizarana ny malety matematika ho an’ny ambaratonga fototra ho an’ireo faritra vitsivitsy eto Madagasikara. Fitaovana entina hanatsarana ny fampianarana matematika any amin’ny kilasy ambaratonga voalohany ity malety matematika ity. Ety am-piandohana, 2.000 ireo malety hozaraina amin’ireo mpampianatra any amin’ny faritra efatra. Arahina fiofanana ny fizarana izany hanamorana […]
Vokatra vaovao : mitrandraka mozika hanova ny fironana ny Mage 4
“Fanatitra”. Mirakitra trandraka sy forona maro sy miavaka io rakikira faran’ny Mage 4 io. Kasain’ny tarika hitondra aina vao ho an’ny tontolon’ny rock izany… “Please come back again”. Ny lohateniny ihany no amin’ny teny anglisy mba hanaitra kokoa. Hira amin’ny teny malagasy izy io, ary anisan’ireo sanganasa vaovaon’ny tarika Mage 4. Anisan’ireo mandrafitra ny rakikira […]
« Hiragasy goavambe » : hifanandrina Rainitelo sy Raveloson
Hisantatra ny taom-pifanandrinana eo amin’ny sehatry ny hiragasy eto an-dRenivohitra ny tarika Rainitelo avy any Andohavary sy Raveloson avy any Arivonimamo. « Hiragasy goavambe » hamoahan’ireto tarika roa samy manana ny maha izy azy ireto ny sanganasany vaovao. Seho goavana tontosaina ao amin’ny Kianjan’ny Kanto etsy Mahamasina ny 17 jolay izao manomboka amin’ny 10 ora maraina. « Mialoha […]
Radanoara Julien : “Ampoizina foana ny asa fampihorohoroana eto Madagasikara”
Par Taratra sur 14/07/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nahabe adihevitra tato ho ato ny hoe fisian’ny asa fampihorohoroana. Maneho ny fijeriny ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien: “Ampoizina foana ny fisian’ny asa fampihorohoroana, na aiza na aiza eran-tany. Anisan’izany ny eto Madagasikara. Tokony ho mailo amin’ny zava-drehetra isika.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Ahoana ny fahitanao ny hoe fisian’ny asa fampihorohoroana eto Madagasikara? […]
Zaka tsara : atao ihany ny atao
Ahoana ihany ity raharaham-pirenena ity? Na ny fiainam-bahoaka, na izay mahasahana mivantana ny sarambabe ifotony… Lasa misy elanelana lavitra sy lalina eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra izao. Manao ny ataony hatrany ny mpitondra amin’izay mahamaika azy, fa tsy miraharaha vahoaka. Tsy hita izay hoe vahaolana afitsoky ny mpitondra amin’ny tsy fandriampahalemana, ny fahantram-bahoaka, ny […]
Leader Fanilo : tsy hampihemotra ny filankevi-pirenena ny raharaham-pitsarana
Niakatra fitsarana ny disadisa eo anivon’ny antoko Leader Fanilo. Na izany aza, tsy hihemotra ny filankevi-pirenena. “Ny antony fitoriana hoe mampiasa ny anaran’ny mpandrindra nasionaly izay tsy voasoratra ao anatin’ny satan’ny antoko aho. Mangataka ny fampitsaharana ny fampiasana ny sary famantarana sy ny fiantsoana ny filankevi-pirenena izay hatao eto Antananarivo, ny 22 sy 23 jolay […]
Mitohy ihany ny amboletra… : mbola nolanian’ny loholona ihany ilay lalàna
Amboletra hatrany. Mbola naverin’ny loholona ary nolaniany, tetsy Anosikely, omaly indray ilay lalàna mifehy ny fifandraisana, efa niteraka resabe sy hitondra olana eto amin’ny firenena. Loholona 41 amin’ireo 63 nivory no nandany izany. Novan’ny loholona ny andininy roa amin’ireo 10 nasian’ny depiote fanitsiana. Eo ny mbola namerenan’ny etsy Anosikely indray fa ny tompon’ny orinasa na […]
Fampandrosoana : mandray andraikitra ny kung-fu
Hanao fihaonambe nasionaly, etsy Mahamasina ny 14 aogositra izao, ny mpanao kung-fu, maherin’ny 10 000, manerana ny Nosy. « Hanehoana io hetsika lehibe io fa vonona ny hitondra ny anjara biriky ho fampandroana ny firenena izahay », hoy ny fanambaran’ny Me Avoko, omaly. Notsiahiviny fa mitohy ny fanomezan-tanan’izy ireo ny fitondrana eo amin’ny sehatry ny fandriampahalemana manerana ny […]
Fiainam-pirenena : mitaky fifampidinihana ny HTT
Mitondra ny heviny ny tanora. « Fotoana tokony hametrahana fitoniana sy filaminana izao ary hakana leson’ny tantara koa. Alamina anaty fifampiresahana sy fifandresen-dahatra ny disadisa miseho », hoy ny mpandrindra nasionalin’ny Hery sy tosika ho an’ny tanora (HTT), Zoky Andry, tetsy amin’ny HJRA Ampefiloha, omaly. Nohitsiny koa fa fotoana tokony hifohazantsika sy hanokafana ny maso izao. Anisan’ny […]
Fiaraha-miasa : vonona ny Sinoa hitondra ny volany amina sehatra rehetra
Par Taratra sur 14/07/2016 Economie, NS Malagasy
Mandalo eto amintsika ny mpandraharaha sinoa, misy 10 eo ho eo izy ireo. Tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny firenena sinoa aty Afrika eo amin’ny sehatry ny toekarena. Maro ireo tokony hotrandrahina eto Madagasikara hampandroso ity firenena ity, mampazoto ireo mpandraharaha sinoa ireo. Niantsoana ny avy any amin’ny faritra rehetra ny fahatongavan’ireo mpandraharaha sinoa ireo, nampahafantarina ny […]
Raikitra ny famonoana afo : tohivakana ny fanambarana fanohanana fitondrana
Raikitra indray ny famonoana afo, toy ny mahazatra. Nanao fanambarana fanohanana ny fitondrana na koa ny tsy tokony hidinana an-dalambe avokoa izao vondron’olona na tompon’andraikitra rehetra izao. Natosiky ny vola na misy fifanarahana ambadika na inona ny takalony ? Nanomboka azy ny filoha nasionalin’ny HVM, rehefa nampiaka-peo ireo avy amin’ny hetsika « Mitsangàna ry Malagasy », ny herinandro […]
Fanondranana letisia : hitodihana ny tsenam-paritra Comesa
Tsenam-paritra aty amin’ny tapany atsimo sy atsinanan’Afrika ny Comesa. Tsy mbola mahazo ny tombontsoa amin’ity tsena ity isika, satria saika miondrana any Eoropa, ao amin’ny Vondrona eoropeanina ny ankamaroan’ny vokatra aty Madagasikara. Maro anefa ny vokatra avy any amin’ny firenena mpikambana ao aminy, manondrana tsy mandoa haba eto amintsika. Nambaran-dRazakandisa Yvon, mpikambana ao anatin’ny Vondron’ny […]
Delestazy : hitohy ny fiakaram-bidy
Miverina indray ny delestazy eto an-dRenivohitra. Fantatra fa mahatonga ny fahatapahan-jiro, maharitra adiny iray hatramin’ny adiny roa, ny fahasimban’ny milina any Andekaleka, mamatsy ny tambajotra eto Antananarivo sy ny manodidina ary hatrany Antsirabe. Etsy ankilany anefa, niakatra ny faktioran’ny Jirama, nanomboka ny volana jona teo. Nihena ny fanampiana ara-bola ity orinasam-panjakana ity, araka ny toromarika […]
Alaotra –Mangoro : “Mangetaheta ambony lakana”, hoy ny lehiben’ny faritra
Angatahina ny zava-drehetra ! “Maro dia maro ny harena misy ato amin’ny faritra”, hoy Raminoarison Honoré, lehiben’ny faritra Alaotra-Mangoro tamin’ny kabariny, nanokafana ny foara “Zina Alaotra-Mangoro” (Zama 2016) ny 5 – 9 jolay teo. Na eo aza ny olana isan-karazany, mbola sompitra voalohany amin’ny famokaram-bary Alaotra. Manampy izany, Fanalamangan’i Mangoro ; tsy latsa-danja, ny ombin’Anosimboahangy […]
Voasambotra, omaly ilay lehilahy nisoloky ho manager-n’ny tarika Ninas. Voalaza fa volabe antapitrisa no efa lasan’ity lehilahy mpisoloky ity. Olona maromaro no efa voasolokiny, araka ny fanazavan’ny tarika. Olona nikarakara lanonana tany Ankazobe no nahazoany volabe. Lasan’ny jiolahy ny vola 6 tapitrisa Ar vokatry ny fanafihana nitranga tao Andranovory Toliara I, afakomaly vao maraina. […]
Ambolomadinika : trano maromaro kilan’ny afo
Par Taratra sur 14/07/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nijoalajoala ny afo tao Ambolomadinika Toamasina, omaly antoandro. Trano maromaro indray kilan’ny afo. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, tsy fantatra mazava izay antony nahatonga ny firehetana fa niainga avy ao amin’ny trano iray ny afo ka niitatra tamin’ireo trano eo amin’ny manodidina. Raikitra ny fifanjevoana satria samy nanao izay ho afany tamin’ny famoahana ny […]
Ambalavao : miaramila adjidà-sefo novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Hita faty tao amin’ny Camp Maromanana fokontany Maroparaky Ambalavao, ny alahady hariva teo, ny Adjidà-Sefo Razafihita. Araka ny loharanom-baovao voaray, miasa ao amin’ny Force de développement RM 2 Fianarantsoa ity miaramila hita faty ity. Avy namonjy fahoriana tany Vangaindrano izy ary nipetra-drery tao amin’ny Camp Maromanana. Tsy fantatra anefa izay zava-nitranga fa olona avy nivarotra […]
Atolotra ny fitsarana anio… : sarona ireo 7 lahy mpanao «opération lakolosim-piangonana»
Saron’ny zanday avy ao amin’ny borigadin’i Fianarantsoa teo amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy ireo olona fito voarohirohy ho nangalatra lakolosy… Nafenina tany anaty gony feno vary sy tranona fahitalavitra ireo lakolosy halatra ireo, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny vondron-tobim-pileovana Matsiatra Ambony, ny Kly Raderaniaina Maromanana Maurice. Niainga avy amin’ny fitoriana napetraky ny fikambanana katolika ao amin’ny zandary […]
Fitondrana jadona : tena tsy misy intsony ny fahalalahana maneho hevitra
Aiza sisa no ahazoan’ny olom-pirenena maneho hevitra amin’izao fitondrana izao? Tsy misy intsony. Na aiza na aiza io, na amin’ny inona na inona. Efa voarara ny fanehoan-kevitra ankalamanjana sy an-dalambe. Voasoketa ho manakorontana sy manongam-panjakana izay mihetsika. Sakana amin’ny fampandrosoana, hono. Ny haino aman-jerim-panjakana, giazana sy bodoin’ny fitondrana sy ny antokony. Amin’izany, tsy mivoaka ny […]
Baomba… vita tanana etsy sy eroa
Par Taratra sur 14/07/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Baomba vita tanana sa grenady fanafihana no napoaka teny amin’ny kianjan’i Mahamasina, ny andron’ny 26 jona? Na ny tomponandraiki-panjakana ambony aza, mivadibadi-dela be ihany. Enga anie mba ho hita sy hampahafantarina ny vahoaka ny marina, fa tsy fitadiavana olona homelohina amin’iny raharaha iny no mahamaika sy imasoana. Fa misy koa izao ny baomba vita tanana […]
Nitondra faisana ny taxibe, naratra voafaoka ny mpandeha… : fiaran’ny polisy niromorimo, namoa-doza tetsy Ambanidia
Par Taratra sur 14/07/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Potika ny taxibe anankiroa, naratra voafaoka ny mpandeha bisikileta, hatramin’ny mpivarotra amoron-dalana. Ny firimorimon’ity fiara 4X4 an’ny polisy ity no nitera-doza nahatonga izany rehetra izany, tetsy Ambanidia, omaly maraina. Nipitika ary vaky loha mihitsy ilay mpitondra bisikileta tsy nahetsika tamin’ny tany intsony izy taorian’ny nandoman’ilay 4×4 an’ny polisy azy. Toy izany koa ilay mpivarota […]
« Précédent 1 … 946 947 948 949 950 … 1 111 Suivant »